Oppo Find N: kani waa mobaylkii ugu horreeyay ee laalaabida summada | Androidsis
Soosaarayaal badan ayaa sii wada inay ku biiraan istaraatiijiyadda furitaanka talefannada casriga ah ee suuqa laalaabaya, hadda waa soo-dejinta Oppo, shirkadda Shiinaha oo soo bandhigtay taleefankeedii ugu horreeyay ee laalaabida iyo mid la socda astaamaha ugu sarreeya iyo tilmaamaha farsamada. Su'aasha, waxaan ka hadlaynaa Oppo Find N.
Mobile-kan cusub waxa uu la socdaa kuwa ugu wanaagsan, haday ahaan lahayd nakhshad iyo shaqo ahaanba. Dabcan, qiimihiisu, sida la filayo, ma aha mid hooseeya. Qalabkani wuxuu ku kacayaa cajiinka wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, waa u qalantaa, maadaama ay leedahay wax badan oo ay bixiso. Hadda, iyada oo aan wax dheeraad ah, waxaan ka hadli doonaa faa'iidooyinka iyo faahfaahinta wax kasta oo ku saabsan. Terminal cusub oo laablaaban.
1 Tilmaamo iyo tilmaamo farsamo ee cusub Oppo Find N
1.1 Waxqabadka ka yimid gacanta Qualcomm
1.2 Kamarado hufan oo loogu talagalay sawirro tayo sare leh
1.3 Tilmaamo kale
1.4 Macluumaadka farsamada
Tilmaamo iyo tilmaamo farsamo ee cusub Oppo Find N
Waxa ugu horreeya ee mudan in la xuso oo ku saabsan Oppo FindN waa naqshadaada. Oo waa in mobile-kani uu leeyahay bilic aad u qurux badan oo fudud oo ka kooban dhabar nadiif ah oo leh moduleka kamarad saddex-geesoodka ah oo lagu daray guri gaar ah oo leh shakhsiyad ku filan, kaas oo uu ku yaal fallaadh laba jibbaaran oo LED ah oo magaca qalabku ku daabacan yahay. Bar.
Naqshadeedu waxay sidoo kale ka kooban tahay laba shaashad, mid dibadda ah iyo mid gudaha ah. Midka dibadda, oo la isticmaali karo marka talefanku laalaado, waa Tiknoolajiyada AMOLED waxayna leedahay geesle ah 5.49 inji. Xallinteedu, marka lagu daro, waa FullHD ee 1,972 x 988 pixels, taas oo keenta cufnaanta pixel ee cadaalad ah ee 402 dpi (dhibcaha halkii inch). Dhankeeda, muraayadda ilaalinaysa waa Corning Gorilla Glass Victus iyo dhalaalka ugu badan ee uu awoodo inuu gaaro waa 1,000 nits, taas oo wanaagsan, laakiin si weyn uma muuqato. Midda kale ayaa ah in heerka dib-u-cusboonaysiinta uu joogo 60 Hz, cabbirka caadiga ah ee hore u jiray.
Shaashadda gudaha ee Oppo Find N way ka weyn tahay, dabcan. Kani waxa uu cabbirkiisu dhan yahay 7.1 inji waana tignoolajiyada LTPO AMOLED. Halkan haddaynu haysano xadiga ugu badnaan 120 Hz kaas oo laqabsi ah, ku salaysan isticmaalka, iyo qayb ka mid ah 1 Hz. Xallintiisu waa FullHD oo ah 1,920 x 1,792 pixels iyo cufnaanta pixel ee uu leeyahay waa 370 dpi, halka iftiinka ugu badan uu yahay 1,000 nits.
Waxqabadka ka yimid gacanta Qualcomm
Processor-ka uu talefankan ku leeyahay gudaha waa kan Qualcomm Snapdragon 888, mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan iyo waxqabadka ugu fiican kaas oo ku salaysan cabbirka noodhka 5 nanometer oo awood u leh inuu gaaro inta jeer ee ugu badan ee saacadaha 2.84 GHz iyada oo ay ugu wacan tahay siddeeddeeda geesood.
RAM-ka ay leedahay waa nooca LPDDR5 iyo 8 ama 12 GB. Meesha kaydinta gudaha, dhinaceeda, oo aan lagu fidin karin kaarka microSD, waa 256 ama 512 GB iyo nooca UFS 3.1. Isla mar ahaantaana, waxaa jira batari awood 4,500 mAh ah kaas oo awood u leh inuu ku dallaco xawaaraha 33 W wuxuuna taageeraa 15 W dallacaadda bilaa-waayirka ah iyo 10 W dallacaadda.
Kamarado hufan oo loogu talagalay sawirro tayo sare leh
Marka laga hadlayo qaybteeda sawirka, Oppo Find N ee cusub ayaa la socota Nidaamka kamarada dambe ee saddex-geesoodka ah oo ka kooban 766 MP IMX50 dareeraha muhiimka ah oo leh f / 1.8 aperture iyo OIS, 481 MP IMX50 kamarad xagal ballaaran leh oo f / 2.2 aperture ah iyo 5 MP Samsung S3K5M13 telephoto sensor oo leh f / 2.4 aperture. Waxa kale oo jira kamarad selfie ah oo loogu talagalay shaashadda gudaha taas oo ah Sony IMX615 oo ah 32 MP oo leh f / 2.4 iyo mid kale oo loogu talagalay shaashadda dibadda taas oo sidoo kale ah Sony IMX615 oo ka kooban xal isku mid ah.
Haddii kale, telefoonka laabi karo ayaa leh Android 11 hoosta ColorOS 12, Isku xidhka 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC ee lacagaha aan xidhiidhka lahayn, aqoonsiga wejiga, akhristaha faraha dhinac-ku-xidhan, iyo kuwa ku hadla stereo. Miisaankiisu waa 275 garaam, mobilka aan la furinna waxa uu cabbiraa 132.6 x 140.2 x 8.0 mm, halka marka la laalaabana uu cabbirkiisu yahay 132,6 x 73 x 15,9 mm.
OPPO hel N
MUUQAAL Dibadda: 5.59-inji AMOLED FullHD 1.972 x 988 pixels (402 dpi) / Corning Gorilla Glass Victus / Gudaha: 7.1-inch AMOLED LTPO FullHD 1.920 x 1.792 pixels (370 dpi) oo leh 1 Hz ilaa 120 Hz
PRORESOR Qualcomm Snapdragon 888
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 256 iyo 512 GB (UFS 3.1)
CHAMBERS Gadaal: Sony IMX776 50 MP (f / 1.8) OIS + Sony IMX481 xagal ballaaran 8 MP (f / 2.2) + Telephoto Telephoto Samsung S5K3M5 13 MP (f / 2.4). Labba LED flash
CAMERAS HOR Arrimaha Gudaha: Sony IMX615 32 MP f / 2.4 / dibadda: Sony IMX615 32 MP f / 2.4
BATARY 4.500 mAh oo leh 33W lacag degdeg ah / 15W khidmad wireless ah
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 11 hoosta ColorOS 12
Isku xirnaanta Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / 5G
MUUQAALO KALE Akhristaha Sawirka Faraha ee Side Mount / Aqoonsiga Wajiga / USB-C / Ku Hadlada Stereo
Qiyaasaha iyo Miisaanka Abuurtay: 132.6 x 73 x 15.9mm / Kala furmay: 132.6 x 140.2 x 7.8 / 275 garaam
Oppo Find N cusub ayaa laga bilaabay Shiinaha waxaana la bilaabi doonaa in halkaas lagu iibiyo midabyo madow, caddaan iyo guduud laga bilaabo 23-ka December ee soo socota. Waxaan sugeynaa soo saaristeeda caalamiga ah. Dhanka kale, kuwani waa qiimahooda:
Oppo Raadi N 8/256 GB: 7,699 yuan (qiyaastii 1,070 euro ee sarifka qiyaastii.).
Oppo Raadi N 12/512 GB: 8,999 yuan (qiyaastii 1,250 euro si loo beddelo qiyaastii.)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Oppo Find N: kani waa mobaylkii ugu horreeyay ee laalaabida summada
Sida loo helo sawiro nuqul ah Android